Ulawulo loMgangatho - I-Kimpok Technology Co, Ltd.
QC / Inkxaso yezobugcisa
Sibeka ukugxininiswa kumgangatho wemveliso, sijonga icandelo ngalinye lomyalelo wakho ngokungqongqo izihlandlo ezithathu. Abasebenzi bethu abanoxanduva lokulawula ikhwalithi esemgangathweni kunye neenkcukacha ezijolise kwiinkcukacha zenza zonke iinzame zokufezekisa iinjongo zemfuno yethu esemgangathweni: isiphene.
Inkqubo / Iinkcukacha zovavanyo
Sine-IQC yokuhlola izixhobo ezingenayo kwaye senze amanqaku okuqala ngaphambi kokuqhuba nayiphi na inxenye okanye ukuhlanganisa iimveliso. Ukuba kukho nayiphi na imeko engalindelekanga yenzeka ingxelo ye-QC kwisebe leNjineli uze uyilungise. Sikwanazo i-QCs zokuhlola ukupakisha nokulayisha kweziqulatho. Sigcina yonke irekhodi kunye nememo kwifayile.
Intshayelelo ye-QA / QC
Siphumeze ezi nkqubo zilandelayo ukuze siqinisekise ukuba zonke iimveliso ziyafezekisa imigangatho ephezulu yabathengi bethu:
(1) Zonke izinto ezingafunekiyo kunye nezixhobo kufuneka zitshekishwe okanye zivavanywe ngaphambi kokungena kwiindawo zoncedo. Zonke izinto ezingafanelekanga ziyaliwa ngoko nangoko
(2) Sinikezela ngovavanyo lokulawula umgangatho kunye nohlalutyo lomgca ngamnye wemveliso
a. Abasebenzi benza iimveliso ngokungqinelana namaxwebhu obuchwephesha abonelelweyo. Iimveliso zokuqala ezimbalwa zosuku ngalunye ziya kujongwa kuqala ngumsebenzi, emva koko zihlolwe ngabavavanyi bethu beQC ngokusisigxina. Imveliso eninzi iya kuqala kuphela ukuba iimveliso sele kuvavanyiwe kwaye kudlulile kuvavanyo
b. Ngexesha lokuveliswa kobunzima, abasebenzi baya kujonga ngamanye amaxesha iimveliso ukuqinisekisa uvavanyo oluhleliweyo. Iqela lethu le-QC ligqibezela ukhenketho lokuhlola kwaye iinxalenye ziye zijongwe phambi kokuba ziqhubele phambili kwinqanaba elilandelayo kwimveliso
(3) Iimveliso ezigqityiweyo zijongwa ukuba zijonga umgangatho wazo
(4) Ingxelo esemgangathweni evela kwisebe lezentengiso ithunyelwa ngokukhawuleza kwi-QC nakumasebe ezobuchwephesha, ivumela ukuphuculwa koyilo kulungiso ukuba lwenzeke ngokukhawuleza.
(5) I-FMEA kunye ne-DMFEA kunye nesicwangciso solawulo sisetyenziselwa imveliso nganye yokulandelela kwaye iimveliso zethu zilawulwa ngokungqongqo ngokusekwe kwi-ISO / TS16949 ekumgangatho osemgangathweni weemoto zombane.